Skirt နဲ့ ဖိနပ်ကို လှည့်ကွက်လေးတွေသုံးပြီး ဖက်ရှင်ကျကျ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကြမလဲ
20 Aug 2018 . 1:59 PM
“တောင်းမှာအကွပ်လူမှာအဝတ်”ဆိုသလိုမျိုး အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်တွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ လိုက်ဖက်မှုရှိရှိ ဝတ်စားနိုင်မှ လူအမြင်မှာ တင့်တယ်ပြီး ပွဲလယ်တိုးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ ဖိနပ် လိုက်ဖက်မှုရှိအောင် ဝတ်စားရတာကလည်း တကယ်ကို ဦးနှောက်စားပြီး ကိုယ်ရဲ့အချိန်တွေကို မလိုအပ်ဘဲ ကုန်ဆုံးစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို Skirt တွေနဲ့ ဖိနပ်တွေကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ရင် လိုက်ဖက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့ လှည့်ကွက်လေးတွေကို သိထားခဲ့ရင် ကိုယ်အချိန်တွေ မလိုအပ်ဘဲ ကုန်ဆုံးသွားတာမျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အချိန်မကုန်ဘဲ စတိုင်လ်ကျကျနဲ့ ကြွကြွရွရွလေးလှပစေဖို့အတွက် လှည့်ကွက်လေးတွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
(၁) Pencil Skirt နဲ့ သိပ်မမြင့်လွန်းတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်
Pencil Skirt ဟာ ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားစေဘဲ ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း လှပတင့်တယ်မှုကို ရရှိစေတဲ့ Skirt မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက Pencil Skirt ကို ရုံးတက်ဖက်ရှင်အနေနဲ့သာ ဝတ်ဆင်ကြသော်လည်း အခုချိန်ခါမှာတော့ ထသွားထလာအနေနဲ့ကော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖက်ရှင်အနေနဲ့ပါ ဝတ်ဆင်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Pencil Skirt က အရှည်အမျိုးမျိုး၊ အရောင်အမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အသားအမျိုးမျိုးနဲ့ လာတဲ့အတွက် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အကိုက်ညီဆုံးပုံစံဖြစ်အောင် အလွယ်တကူ ရွေးချယ်ပြီး ဝတ်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ Pencil Skirt ကို ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အရမ်းမမြင့်လွန်းဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်မျိုးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ခြင်းက အလိုက်ဖက်ဆုံးပါလို့ နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာတွေက အကြံပေးထားပါတယ်။ ဒါအပြင် ကွင်းထိုးဖိနပ်လေးတွေ၊ ကြိုးသိုင်းဖိနပ် အမြင့်လေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးလည်း ဝတ်ဆင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဖိနပ်လေးတွေနဲ့ ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Pencil Skirt ရဲ့အရှည်က ဒူးထိရှည်တာမျိုး(သို့) ဒူးကျော်တာမျိုး ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Pencil Skirt and Comfortable Heel
(၂) Tulip Skirt နဲ့ Ankle boot
Tulip Skirt ကို မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဂါဝန်အကားကိုမှ အရမ်းအကာကြီး မဟုတ်ဘဲ ပြေပြေလေးနဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ပေါ်လွင်စေတဲ့ စကပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Tulip Skirt တွေဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ တင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ပေါ်လွင်စေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ စကပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Tulip စကပ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီမှုရှိတဲ့ဖိနပ်ကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လိုက်ရင် စွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အသွင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ ခြေကျင်းဝတ်အုပ်တဲ့ Ankle Boot လိုမျိုး ဖိနပ်တွေနဲ့ ခြေချောင်းတွေ ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဖိနပ်မျိုးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့လည်း ရပါတယ်။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးမှာဆို Strappy Gladiator Sandals လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်အပါးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ ခြေချောင်းလေးတွေပေါ်တဲ့ ဖိနပ်မျိုးနဲ့ ဝတ်ဆင်ရတာ အဆင်မပြေရင်တော့ ထိပ်ချွန်ဖိနပ်ဒေါက်ပါးလေးတွေနဲ့လည်း ဝတ်ဆင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဂေါ်တဲ့ ဖက်ရှင်ကို ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Sneaker နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဝတ်ဆင်ကြည့်လို့ ရပါသေးတယ်။
Tulip Skirt and Ankles Boot
(၃) အောက်နားကားတဲ့စကပ် (Flared Skirt) နဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်အမျိုးမျိုး
အောက်နားကားတဲ့ စကပ်တွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ဒေါက်ဖိနပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်ရဲ့အမြင့်ကိုတော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အမြင့်မျိုး၊ ဝတ်ထားရင်သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ အမြင့်မျိုးနဲ့ တက်ရောက်မယ့်ပွဲအခမ်းအနား၊ သွားရောက်မယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးမှာဆိုရင် ကြိုးသိုင်းဖိနပ်နဲ့လည်း တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါမှာ ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ Flared Skirt နဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ ရှုးဖိနပ်တစ်စုံ (သို့) High-Heeled Boots နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လိုက်ရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖက်ရှင်ကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Flared skirt and heels to your taste
(၄) အထပ်ထပ်ပါတဲ့စကပ် (Wrap Skirt) နဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဖိနပ်
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို အများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစာရာမလိုဘဲ ဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့ စကပ်ကို ပြပါဆို ရင် Wrap Skirt လေးတွေကိုပဲ ညွှန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကပ်ကို ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ ဘယ်ဖိနပ်အမျိုးအစားနဲ့မဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ပြီး ဝတ်ဆင်လို့ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေ အကြံပေးထားတာကတော့ Wrap Skirt လေးတွေ ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင် ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Flat Shoe လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ လေးထောင့်ဒေါက်လေးတွေနဲ့ ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်း မိန်းမဆန်ဆန် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ လှပစတိုင်လ်ကျနေမှာ သေချာပါတယ်။
Wrap Skirt and Flat Sole
(၅) A-Line Skirt နဲ့ High Heel
A ပုံသဏ္ဍန်ကောက်ကြောင်းရှိတဲ့ စကပ်ကို ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမျုိုးမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာကတော့ ခြေထောက်ကို တိုသွားစေပြီး တင်ကို ကားသွားစေတယ်လို့ ထင်ရစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမထင်ရစေဖို့အတွက် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်မယ့်ဖိနပ်ကို သေချာဂရုတစိုက် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ High Heel (သို့) Mid-high Heel နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကျစ်လျစ်သေးသွယ်သွားသယောင်ထင်ရပြီး ကောက်ကြောင်းကို ပေါ်လွင်လာစေပါတယ်။ Heel ဝတ်တဲ့အခါမှာ အမြင့်ကိုတော့ ရာသီဥတုနဲ့ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အကွာအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မယ့် အမြင့်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ A-Line Skirt ဝတ်ထားလို့ ပုတယ်လို့ထင်နေသေးရင်တော့ Sneaker တစ်ရံနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ဝတ်ဆင်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
A Line Skirt and High Heel
(၆) Mini Skirt နဲ့ Boots
စကပ်ပုံစံမျိုးစုံထဲက Mini Skirt အမျိုးအစားဟာ Boot တွေနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ စကပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Mini Skirt တွေဟာ ယခုဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ အသားအမျိုးမျိုး၊ အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံကို ရွေးချယ်ပြီး Boot တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဇာပါတဲ့ High-Heel လိုမျုိုး Boot တွေနဲ့ မာကျောကျောဖက်ရှင်ပုံစံကို ဖန်တီးလို့ရသလို သားရေ Boot နဲ့တွဲဖက်ပြီး ပေ့ါပေါ့ပါးပါးဖက်ရှင်ပုံစံကိုလည်း ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အေးတဲ့ရာသီမျိုးမှာဆိုရင်တော့ ဒူးထိအရှည်ရှိတဲ့ Boot တွေဟာ Mini Skirt နဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။
(၇) Midi Skirt နဲ့ ဖိနပ်အမျိုးမျိုး
Midi Skirt လေးတွေဟာ နွေရာသီနဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ Skirt လေးတွေဖြစ်ပြီး မြောက်မြားလှသော ဖိနပ်တွေနဲ့လည်း လိုက်ဖက်ညီမှုရှိတဲ့ စကပ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Midi Skirt လေးတွေကို Sneaker နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လိုက်ရင် လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြိုးသိုင်းဖိနပ်အပါးလေးတွေ၊ ထိပ်ဖွင့်ဖိနပ်လေးတွေနဲ့ Mid-High Heel လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
Midi Skirt and Heel
(၈) Maxi Skirt နဲ့ ထူထူမြင့်မြင့်ရှုးဖိနပ်
Maxi Skirt တွေဟာ ခါးကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ စကပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Maxi Skirt တွေကို ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာ လိုက်ဖက်ညီမှုရှိတဲ့ အရောင်နဲ့ခါးပတ်လေးတွေကို ထပ်ပေါင်းစပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကျနအောင် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Maxi Skirt တွေကို Heel (သို့) ထူထူမြင့်မြင့်ရှုးဖိနပ်တွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်တာက အလိုက်ဖက်ဆုံးပါလို့ ဖက်ရှင်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ နွေရာသီမှာဆိုရင်တော့ Maxi Skirt ကို High-Platform Sandals မျိုးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရပြီး အေးတဲ့ရာသီမှာဆိုရင်တော့ High-Heel Ankle Boot တွေလိုမျိုးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။
Mixi Skirt and Heel
ကဲ…. ဘယ်လိုဖိနပ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုစကပ်အမျိုးအစားတွေ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်တာက လိုက်ဖက်မှုရှိလဲဆိုတာ သိသွားပြီးဆိုတော့ အချိန်ကုန်သက်သာသာနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လိုက်ဖက်တဲ့ဖက်ရှင်ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကော ဘယ်လိုစကပ်တွေနဲ့ ဖိနပ်တွေကို အထာကျကျဝတ်ဆင်လေ့ရှိလဲဆိုတဲ့ ဖက်ရှင်အမြင်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦး။
Skirt နဲ့ ဖိနပျကို လှညျ့ကှကျလေးတှသေုံးပွီး ဖကျရှငျကကြ တှဲဖကျဝတျဆငျကွမလဲ
“တောငျးမှာအကှပျလူမှာအဝတျ”ဆိုသလိုမြိုး အဝတျအစား၊ ဖိနပျတှကေို သူ့နရောနဲ့သူ လိုကျဖကျမှုရှိရှိ ဝတျစားနိုငျမှ လူအမွငျမှာ တငျ့တယျပွီး ပှဲလယျတိုးနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာ ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ ဝတျစုံနဲ့ ဖိနပျ လိုကျဖကျမှုရှိအောငျ ဝတျစားရတာကလညျး တကယျကို ဦးနှောကျစားပွီး ကိုယျရဲ့အခြိနျတှကေို မလိုအပျဘဲ ကုနျဆုံးစနေိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုစကပျတှနေဲ့ ဖိနပျတှကေို တှဲဖကျဝတျဆငျရငျ လိုကျဖကျမှုရှိလဲဆိုတဲ့ လှညျ့ကှကျလေးတှကေို သိထားခဲ့ရငျ ကိုယျအခြိနျတှေ မလိုအပျဘဲ ကုနျဆုံးသှားတာမြိုး မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ အခြိနျမကုနျဘဲ စတိုငျလျကကြနြဲ့ ကွှကွှရှရှလေးလှပစဖေို့အတှကျ လှညျ့ကှကျလေးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ။
(၁) Pencil Skirt နဲ့ သိပျမမွငျ့လှနျးတဲ့ ဒေါကျဖိနပျ
Pencil Skirt ဟာ ဘယျတော့မှ ရိုးမသှားစဘေဲ ဝတျလိုကျတဲ့အခြိနျတိုငျး လှပတငျ့တယျမှုကို ရရှိစတေဲ့ Skirt မြိုး ဖွဈပါတယျ။ အရငျတုနျးက Pencil Skirt ကို ရုံးတကျဖကျရှငျအနနေဲ့သာ ဝတျဆငျကွသျောလညျး အခုခြိနျခါမှာတော့ ထသှားထလာအနနေဲ့ကော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖကျရှငျအနနေဲ့ပါ ဝတျဆငျလာကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Pencil Skirt က အရှညျအမြိုးမြိုး၊ အရောငျအမြိုးမြိုး၊ ပုံစံအမြိုးမြိုး၊ အသားအမြိုးမြိုးနဲ့ လာတဲ့အတှကျ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ အကိုကျညီဆုံးပုံစံဖွဈအောငျ အလှယျတကူ ရှေးခယျြပွီး ဝတျဆငျလို့ ရပါတယျ။ Pencil Skirt ကို ဝတျဆငျတဲ့အခါမြိုးမှာ အရမျးမမွငျ့လှနျးဘဲ သကျတောငျ့သကျသာရှိတဲ့ ဒေါကျဖိနပျမြိုးနဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျခွငျးက အလိုကျဖကျဆုံးပါလို့ နာမညျကွီးဒီဇိုငျနာတှကေ အကွံပေးထားပါတယျ။ ဒါအပွငျ ကှငျးထိုးဖိနပျလေးတှေ၊ ကွိုးသိုငျးဖိနပျ အမွငျ့လေးတှနေဲ့ ပေါငျးစပျပွီးလညျး ဝတျဆငျကွညျ့လို့ရပါတယျ။ အထကျမှာဖျောပွထားတဲ့ ဖိနပျလေးတှနေဲ့ ဝတျမယျဆိုရငျတော့ Pencil Skirt ရဲ့အရှညျက ဒူးထိရှညျတာမြိုး(သို့) ဒူးကြျောတာမြိုး ဖွဈဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
(၂) Tulip Skirt နဲ့ Ankle boot
Tulip Skirt ကို မွငျသာအောငျပွောရမယျဆိုရငျတော့ ဂါဝနျအကားကိုမှ အရမျးအကာကွီး မဟုတျဘဲ ပွပွေလေေးနဲ့ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျ ပျေါလှငျစတေဲ့ စကပျမြိုးဖွဈပါတယျ။ Tulip Skirt တှဟော မိနျးကလေးတှရေဲ့ တငျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို ပျေါလှငျစဖေို့ အထောကျအပံ့ပေးတဲ့ စကပျအမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။ Tulip စကပျနဲ့ လိုကျဖကျညီမှုရှိတဲ့ဖိနပျကို တှဲဖကျဝတျဆငျလိုကျရငျ စှဲဆောငျမှုအားကောငျးတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအသှငျကို ရရှိစပေါတယျ။ ခွကေငျြးဝတျအုပျတဲ့ Ankle Boot လိုမြိုး ဖိနပျတှနေဲ့ ခွခြေောငျးတှေ ပျေါလှငျစတေဲ့ ဖိနပျမြိုးတှနေဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလို့လညျး ရပါတယျ။ ပူအိုကျတဲ့ရာသီဥတုမြိုးမှာဆို Strappy Gladiator Sandals လို့ချေါတဲ့ ကွိုးသိုငျးဖိနပျအပါးနဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလို့ ရပါတယျ။ ခွခြေောငျးလေးတှပေျေါတဲ့ ဖိနပျမြိုးနဲ့ ဝတျဆငျရတာ အဆငျမပွရေငျတော့ ထိပျခြှနျဖိနပျဒေါကျပါးလေးတှနေဲ့လညျး ဝတျဆငျကွညျ့လို့ရပါတယျ။ ဂျေါတဲ့ ဖကျရှငျကို ရခငျြတယျဆိုရငျတော့ Sneaker နဲ့ ပေါငျးစပျပွီး ဝတျဆငျကွညျ့လို့ ရပါသေးတယျ။
(၃) အောကျနားကားတဲ့စကပျ (Flared Skirt) နဲ့ ဒေါကျဖိနပျအမြိုးမြိုး
အောကျနားကားတဲ့ စကပျတှရေဲ့ အားသာခကျြကတော့ ဒေါကျဖိနပျအမြိုးမြိုးနဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလို့ရခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒေါကျဖိနပျရဲ့အမွငျ့ကိုတော့ ကိုယျနှဈသကျတဲ့ အမွငျ့မြိုး၊ ဝတျထားရငျသကျတောငျ့သကျသာရှိတဲ့ အမွငျ့မြိုးနဲ့ တကျရောကျမယျ့ပှဲအခမျးအနား၊ သှားရောကျမယျ့နရောပျေါမူတညျပွီး ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ ပူအိုကျတဲ့ရာသီဥတုမြိုးမှာဆိုရငျ ကွိုးသိုငျးဖိနပျနဲ့လညျး တှဲဖကျဝတျဆငျလို့ ရပါတယျ။ အငျတာဗြူးဖွတေဲ့အခါမှာ ဝတျဆငျမယျဆိုရငျတော့ Flared Skirt နဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ ရှုးဖိနပျတဈစုံ (သို့) High-Heeled Boots နဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလိုကျရငျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ဖကျရှငျကို ရရှိစမှောဖွဈပါတယျ။
(၄) အထပျထပျပါတဲ့စကပျ (Wrap Skirt) နဲ့ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ဖိနပျ
ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို အမြားကွီးထညျ့သှငျးစဉျးစာရာမလိုဘဲ ဝတျဆငျလို့ရတဲ့ စကပျကို ပွပါဆို ရငျ Wrap Skirt လေးတှကေိုပဲ ညှနျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီစကပျကို ဝတျဆငျတဲ့အခါမှာ နောကျထပျထူးခွားခကျြတဈခုကတော့ ဘယျဖိနပျအမြိုးအစားနဲ့မဆို လှတျလှတျလပျလပျရှေးခယျြပွီး ဝတျဆငျလို့ရခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဇိုငျနာတှေ အကွံပေးထားတာကတော့ Wrap Skirt လေးတှေ ဝတျဆငျမယျဆိုရငျ ရာသီဥတုနဲ့ကိုကျညီတဲ့ Flat Shoe လေးတှနေဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလို့ရပါတယျ။ အခုခတျေစားနတေဲ့ လေးထောငျ့ဒေါကျလေးတှနေဲ့ ဝတျဆငျမယျဆိုရငျလညျး မိနျးမဆနျဆနျ သိမျသိမျမှမှေ့နေဲ့ လှပစတိုငျလျကနြမှော သခြောပါတယျ။
(၅) A-Line Skirt နဲ့ High Heel
A ပုံသဏ်ဍနျကောကျကွောငျးရှိတဲ့ စကပျကို ဝတျဆငျတဲ့အခါမြိုးမှာ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတာကတော့ ခွထေောကျကို တိုသှားစပွေီး တငျကို ကားသှားစတေယျလို့ ထငျရစတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလိုမထငျရစဖေို့အတှကျ တှဲဖကျဝတျဆငျမယျ့ဖိနပျကို သခြောဂရုတစိုကျ ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ High Heel (သို့) Mid-high Heel နဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျခွငျးဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျကဈြလဈြသေးသှယျသှားသယောငျထငျရပွီး ကောကျကွောငျးကို ပျေါလှငျလာစပေါတယျ။ Heel ဝတျတဲ့အခါမှာ အမွငျ့ကိုတော့ ရာသီဥတုနဲ့ နစေ့ဉျလမျးလြှောကျရတဲ့ အကှာအဝေးပျေါမူတညျပွီး သကျတောငျ့သကျသာဖွဈမယျ့ အမွငျ့ကို ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။ A-Line Skirt ဝတျထားလို့ ပုတယျလို့ထငျနသေေးရငျတော့ Sneaker တဈရံနဲ့ တှဲဖကျပွီး ဝတျဆငျကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
(၆) Mini Skirt နဲ့ Boots
စကပျပုံစံမြိုးစုံထဲက Mini Skirt အမြိုးအစားဟာ Boot တှနေဲ့ အလှနျလိုကျဖကျတဲ့ စကပျဖွဈပါတယျ။ Mini Skirt တှဟော ယခုဆိုရငျ ဈေးကှကျထဲမှာ အသားအမြိုးမြိုး၊ အရောငျအမြိုးမြိုးနဲ့ ရရှိနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျနဲ့ကိုကျညီတဲ့ပုံစံကို ရှေးခယျြပွီး Boot တှနေဲ့ ပေါငျးစပျကွညျ့လိုကျပါ။ ဇာပါတဲ့ High-Heel လိုမြိုး Boot တှနေဲ့ မာကြောကြောဖကျရှငျပုံစံကို ဖနျတီးလို့ရသလို သားရေ Boot နဲ့တှဲဖကျပွီး ပေ့ါပေါ့ပါးပါးဖကျရှငျပုံစံကိုလညျး ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။ အေးတဲ့ရာသီမြိုးမှာဆိုရငျတော့ ဒူးထိအရှညျရှိတဲ့ Boot တှဟော Mini Skirt နဲ့ အလှနျလိုကျဖကျပါတယျ။
(၇) Midi Skirt နဲ့ ဖိနပျအမြိုးမြိုး
Midi Skirt လေးတှဟော နှရောသီနဲ့ အလှနျလိုကျဖကျတဲ့ Skirt လေးတှဖွေဈပွီး မွောကျမွားလှသော ဖိနပျတှနေဲ့လညျး လိုကျဖကျညီမှုရှိတဲ့ စကပျအမြိုးအစားဖွဈပါတယျ။ Midi Skirt လေးတှကေို Sneaker နဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလိုကျရငျ လူငယျဆနျဆနျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသှငျအပွငျကို ရရှိစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကွိုးသိုငျးဖိနပျအပါးလေးတှေ၊ ထိပျဖှငျ့ဖိနပျလေးတှနေဲ့ Mid-High Heel လေးတှနေဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလို့ ရပါတယျ။
(၈) Maxi Skirt နဲ့ ထူထူမွငျ့မွငျ့ရှုးဖိနပျ
Maxi Skirt တှဟော ခါးကိုပျေါလှငျစတေဲ့ စကပျအမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Maxi Skirt တှကေို ဝတျဆငျတဲ့အခါမှာ လိုကျဖကျညီမှုရှိတဲ့ အရောငျနဲ့ခါးပတျလေးတှကေို ထပျပေါငျးစပျပွီး ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကနြအောငျ ဖနျတီးလို့ရပါတယျ။ Maxi Skirt တှကေို Heel (သို့) ထူထူမွငျ့မွငျ့ရှုးဖိနပျတှနေဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျတာက အလိုကျဖကျဆုံးပါလို့ ဖကျရှငျကြှမျးကငျြသူတှရေဲ့ ပွောကွားခကျြအရ သိရပါတယျ။ နှရောသီမှာဆိုရငျတော့ Maxi Skirt ကို High-Platform Sandals မြိုးနဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလို့ရပွီး အေးတဲ့ရာသီမှာဆိုရငျတော့ High-Heel Ankle Boot တှလေိုမြိုးနဲ့ တှဲဖကျဝတျဆငျလို့ရပါတယျ။
ကဲ…. ဘယျလိုဖိနပျတှနေဲ့ ဘယျလိုစကပျအမြိုးအစားတှေ တှဲဖကျဝတျဆငျတာက လိုကျဖကျမှုရှိလဲဆိုတာ သိသှားပွီးဆိုတော့ အခြိနျကုနျသကျသာသာနဲ့ မွနျမွနျဆနျဆနျ လိုကျဖကျတဲ့ဖကျရှငျကို ဖနျတီးနိုငျပွီးလို့ ထငျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကော ဘယျလိုစကပျတှနေဲ့ ဖိနပျတှကေို အထာကကြဝြတျဆငျလရှေိ့လဲဆိုတဲ့ ဖကျရှငျအမွငျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးခဲ့ပါဦး။